Taliska NISA oo helay xog ku saabsan HSaraakiil ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Taliska NISA oo helay xog ku saabsan HSaraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Taliska Sirdoonka iyo Nabad Sugida Gobalka Banaadir ee NISA ayaa Helay xog ah in ay dhinteen labo Horjooge oo u qaabilsanaa Al-Shabaab dhagarta Shacabka Gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta Qaraxyada iyo Miinooyinka.
Maxamuud Goobe Raage Jiisoow (Daariq) oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Howl-galada Qaraxyada Miinooyinka Gobalka Banaadir iyo Shabeelada Hoose iyo Muuse Kooble oo isna qaabilsanaa Qaraxyada Miinooyinka Gobolka Banaadir, kana hooseeyey Daariq iyo 6 dhagar-qabe oo kale oo Miinooyin ka soo qaaday deegaanka Tooratooroow ayay 28-03-2021 kula qaraxday deegaanka Basro ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhanka kale 03-04-2021 Daariq, waxaa lagu dilay dagaalkii Deegaanka Bariire ee gobolka Shabeella Hoose ay Ciidanka xooga dalka jab xoogan ku gaarsiiyeen argagixisada Al-Shabaab.
Labadan dhagarqabe ayaa Argagixisada Al-shabaab muhiim ugu ahaa maleegida dhagarta Shacabka, maadaama aad ay ugu xeel dheeraayeen dhanka Qaraxyada Miinooyinka, kuwaasi oo isku dayey inay awooda saaraan sidii ay Qaraxyo kala duwan uga fulin lahaayeen Gobolka Banaadir.
Ha’yaddaha Amniga Gobalka Banaadir ayaa uga mahad celinayay geesiyaasha Ciidanka xoogga dalka oo helay xogta Al-shabaab ee ku aadan Dabargoynta Ummadda Soomaaliyeed ugana hor tagay si geesinnimo leh isku deygooda, iyagoona xaqiijiyey awooda iyo kartida ay u leeyihiin badbaadinta Shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleBurcad dhac iyo Dil ka geysatay Xaafadaha Degmada Kaaraan.
Next articleXildhibaan Daahir Amiin jeesoow oo Jawaab deg deg ah siiyay Sanoter faroole